Sida loo dar Lyrics in Your Lugood Music in Dufcaddii
Sida loo dar Lyrics in Lugood Library in Dufcaddii
> Resource > Lugood > Sida loo dar Lyrics in Lugood Library in Dufcaddii
Waxaa weyn bay ahaan doontaa, haddii aad ka arki kartaa lyrics ah inta aad dhagaysanayso heeso. Oo markii aad muusiko ku Lugood, lyrics ah ka muuqan karaan, laakiin ma aha qayb ka mid ah song laftiisa, si aan kuu soo gudbin karaa lyrics ee qalabka la qaadi karo aad. Waxa kale oo aad leedahay si aad u ciyaaro heeso ka mid mid si ay u helaan lyrics ee song kasta Lugood. Waa waqti lumis iyo tamarta runtii. Wondershare TidyMyMusic u Mac , si kastaba ha ahaatee, xanuun taasi fududayn kartaa adigoo ku daray lyrics maktabadda Lugood aad Dufcaddii. In kaliya dhowr qasabno, waxaad ka heli kartaa lyrics iyo kuwa Cudarada in heeso ay qaataan on go ah. Intaa waxaa dheer, waxa ay sidoo kale ka heli macluumaad kale sida faahfaahinta track, farshaxanka album oo dheeraad ah. Bal aan waqti lahayn iyo hubi sida loo isticmaalo hoos ku qoran.
1 dar maktabadda Lugood barnaamijka
Wixii maktabadda Lugood, uma baahnid inaad u baahan tahay inaad soo dhoofsadaan barnaamijka iskaa. Markii barnaamijka mar kasta oo furmay, waa iskaan doonaa maktabadda oo dhan Lugood iyo dajiyaan music si ay saxaarad faylka hoos nidaamsan Lugood.
2 Raadi lyrics ee dhammaan music Lugood ah
Si aad u hesho lyrics in Dufcaddii, kaliya heli badhanka Scan in madax. Sax checkbox ee Search for Songs Allaha oo guji badhanka Scan. Markaas barnaamijkan bilaabi doonaan in ay ka heli lyrics ee dhammaan music ah Lugood iyo macluumaadka kale ee sidoo kale waxaa laga heli karaa inta lagu guda jiro geeddi-socodka.
Fiiro gaar ah: Barnaamijkan ayaa sidoo kale kaa caawin karaan inaad ka saarto tus ka Lugood. Just sax checkbox ee Search for labalaabka Songs oo guji badhanka Scan. Markaas qashinka aad u guurto kartaa heeso labalaabka.
3 dar lyrics maktabadda oo dhan Lugood
Ka dib markii lyrics waa la ogaaday, in aad u baahan tahay si ay u Cudarada in song kasta si ay u meel qaadan. Dooro mid ka mid song oo aad ka arki kartaa liiska buuxa macluumaadka khaanadda saxda ah. Waxaad hubisaa in macluumaadka ku waa waxa aad u baahan tahay oo riix badhanka codso in uu xaq u hooseysa. Waxa kale oo aad dooran kartaa dhowr heeso Lugood si aad u codsato waqti isku mid ah.
By socda tallaabooyinka kor ku xusan, lyrics waxaa gundhig si music Lugood iyo marka aad wareejiyo heesaha oo qalabka la qaadi karo sida iPad, weli waxaad ka arki kartaa lyrics ah. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel macluumaadka keligaa, waxaad riixi kartaa icon Edit ku khaanadda saxda ah oo buuxi duurka tafatir ah. Ma doonaysaa in ay isku day ah oo hadda? Just ka hor tagaan oo ay u soo bixi barnaamijkan oo hadda ka dib ku raaxaysan brand aragnimo music cusub.
Qalabayn ilaa nadiif ah oo aad habayso maktabadda music Lugood
Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka iPod in Lugood